मूख्य – Page3– Businesssansar
मूख्य (Page 3)
नेपालबाट बंगलादेशले पाँच सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा अहिलेसम्म भारत र चीनको मात्रै लगानी रहेकोमा अब बंगलादेश पनि थपिएको छ । बंगलादेशसँग शुक्रबार नै उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । उर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि शुक्रबार नेपाल र बंगलादेशबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर समेत भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइContinue Reading
बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको आठ वर्ष पुग्यो । तर त्यसमा खासै प्रगति भएको पाइदैन । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको योजना तयार गरी काम शुरु गरियो । तर जग्गा अधिग्रहण र तारबार बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन । ‘अर्को वर्ष बन्छ भन्दाभन्दै आठ वर्षContinue Reading
कंगारु एजुकेशन फाउण्डेशनले बैदेशिक अध्ययन गर्न चाहने विधार्थीहरुलाइ लक्षित गरी आयोजना गरेको कंगारु एजुकेशन फेयर बुधवार काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको छ । मेलामा अस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, अमेरिका, क्यानडा र यूरोपका गरी २६ वटा प्रतिष्ठीत विश्वविद्यालय, सरकारी कलेज, तथा प्राइभेट कलेजहरुको सहभागीता रहको थियो । मेला अवलोकनमा आएका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई एकै ठाँउबाटContinue Reading
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका ४६७ कर्मचारीले फिर्ता गरे निवेदन
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका ४६७ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशमा नजाने भन्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीलाई निवेदन फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि अहिलेसम्म ४६७ जना कर्मचारीले निवेदन दर्ता गराएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेज अधिकारीले जानकारी दिए । सचिव डा सरोज पोखरेल र सन्तु कोइरालासहित छContinue Reading
राष्ट्र बैंकद्धारा चार खर्ब ९४ अर्बका नोट निष्काशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म चार खर्ब ९४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँका नोट निष्काशन गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको गत बर्षको वासलात अनुसार, सर्वसाधारणको हातमा भने चार खर्ब ८६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढि नोट छ । जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो १५ प्रतिशतले बढि हो । अघिल्लो बर्ष सर्वसाधारणकोContinue Reading
जग्गासम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी एउटै एपमा : सरकारले ल्यायो ‘भूमी सुशासन’ एप
सरकारले भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने मोवाईल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘भूमि सुशासन’ नामको एप्स प्रयोगमा ल्याएको हो । यस एपलाई नक्सा नामक कम्पनीले डेभलप गरेको हो । एप्समा मन्त्रालयका भूमिसम्बन्धि सेवाहरुको सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुने छ । भूमिसम्बन्धि कानुनसमेत एप्समा समेटिएको कृषि, भूमिContinue Reading
​डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड (DishHome)ले सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (SIM TV) किन्ने भएको छ । दुवै कम्पनीको संचालक समितिको संयुक्त वैठकले 'सिम टि.भि.' डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले किन्ने गरि खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । यस खरिद सम्झौता अन्तर्गतको सेयर खरिद निकट भविष्यमै सम्पन्न हुनेछ । यसका साथै सिम टिभिको व्यवस्थापनकोContinue Reading
इन्फर्मेशन सेक्यूरिटी रेस्पोन्ट टिम नेपाल(एनपीसर्ट)को आयोजनामा साउन ११ र १२ गते ग्लोबल साइबर सेक्यूरिटी समिट २०१८ हुने भएको छ । बिल्डिंग ग्लोबल एलाइन्स फर साइबर रिजिलेन्स नामक नाराका साथ काठमाडौँमा हुन लागेको समिटको पूर्वसंध्यामा नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(नास्ट)ले एक दिने प्रि–समिट कार्यशाला आयोजना गर्दैछ । यसलाई लावा, चेकContinue Reading
डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडको संचालक समितिको अध्यक्षमा हेमराज ढकाल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको असार २१ गते शुक्रबार बसेको संचालक समितिको बैठकले देवी प्रकाश भट्टचनद्धारा अध्यक्ष तथा संचालक पदबाट दिइएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै ढकाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । भट्टचनको राजीनामापछि रिक्त रहेको संचालक पदमा भने सुदिप आचार्यलाई नियुक्त गरिएकोContinue Reading
पछिल्लोपटक सहकारी संस्थाको लगानी घरजग्गा खरीद बिक्री, वैदेशिक रोजगार र अध्ययन, यातायात क्षेत्रमा सीमित हुन पुगेको छ । जुन लगानीबाट राज्यलाई उल्लेखनीय प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । चर्को ब्याजमा सहकारीसँग ऋण लिएर मोटरसाइकल खरीद गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । रुपैयाँलाई उचित रुपमा आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकिएन भने त्यसContinue Reading